Isizathu sokuba iKerala ibizwa ngokuba yiparadesi
IKerala ayikho ngaphantsi kweparadesi esemhlabeni kwaye ke yaziwa ngokufanelekileyo njengeLizwe LikaThixo. Ifumaneka kwi Unxweme lwaseMalabar eMzantsi India, urhulumente udume ngokuma komhlaba okwahlukeneyo, ugcwele uthungelwano lwemilambo, amachibi, kunye nemijelo eyenza oko kubizwa ngokuba ngamachibi asemva, iilwandle, kunye neentaba ezineti, ikofu, kunye nezityalo zesinongo, kunye nentaphane yezilwanyana zasendle kunye izinto eziphilayo. Kukho ubuhle obuninzi bendalo ekufuneka buphononongwe eKerala kunye nokunyanzelisa ukhenketho oluzinzileyo, urhulumente unokuphononongwa ngabakhenkethi ngendlela engachaphazeli imeko-bume. Ngaphandle kokuqhubeka uluvo nolu uluhlu lwezinto onokuzenza kunye neendawo onokuzibona eKerala kubakhenkethi.
Uyifumana njani i-Visa yaseIndiya kwikhaya lakho
Fumana yakho Indian Visa ekwi-Intanethi ngokugcwalisa iphetshana elilula, yonke into oyifunayo yidilesi ye-imeyile, indlela yokuhlawula kwaye kuya kufuneka ukwazi ukuyizalisa Isicelo seVisa saseIndiya Yenza iifom kwimizuzu emibini ukuya kwemithathu.
Sinikezela ngeengcebiso zethu zeengcali ngondwendwelo lwakho eKerala, ekwabizwa ngokuba liLizwe LikaThixo xa undwendwela eIndiya I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya.
Amanzi angasemva kunye neengcango zamanzi eKerala
Amanye amachibi amachibi amtyuba aseKerala, anetyuwa eninzi eyenziwa ngamanzi amatsha kodwa angaphantsi kwamanzi olwandle, afana noMmandla waseMalabar woLwandle lwaseArabhiya enza uthungelwano olwaziwa njengamanzi angasemva kweKerala. La manzi angamanzi adume ngokukhwela iphenyane ezindlini kunye nogqatso lwamaphenyane ngexesha leminyhadala kwaye yenye yezona ndawo zinomtsalane kubakhenkethi bakarhulumente. Okuninzi amanzi avela emva eKerala ngokuqinisekileyo onokuthi utyelele ngumthi wesundu obiyelwe ngasemva kweAlleppey apho ungathabatha khona isikhululo sendlu yokuhamba ngezikhephe kunye nongqina umdyarho wesahlulo seenyoka ngoAgasti nangoSeptemba kunye nendawo entle yokubuya kukaKollam, uLwandle lweAshtamudi, Idolophu yamazibuko akudala kwiKerala kwaye i isango eliya kumanzi angasemva aseKerala.
IKerala ilikhaya nakweyona mijelo mihle mihle nangomhle wamanzi uya kuze uyibone ebomini bakho kwaye ngokuqinisekileyo kufuneka undwendwele ezinye zezona Iifayile zamanzi ezidumileyo zaseKerala, ezi zintaba-ntathu zeSochiparra Falls eWayanad, zijikelezwe ngamahlathi macala onke, kwaye ziwele echibini elikhulu apho abakhenkethi banokuqubha kwaye bahlambe; I-Athirappilly Falls eThrissur, eyiyo awona manzi maninzi eIndiya kwaye uyabizwa I-Niagara yaseIndiya; kunye nePalaruvi Falls, eyenye ye Iindawo ezinamanzi aphezulu eIndiya.
Iilwandle kunye nezibane ezincinci eKerala
IKerala idume kakhulu ngeelwandle zayo, kangangokuba abanye abantu banokuzibiza ngokuba zingaphezulu nakwilwandle lwaseGoa, ngakumbi kuba ezinye zazo azinabuninzi kwaye zizolile kwaye zizolile, nangona kukho iilwandle ezininzi apha nalapho abakhenkethi beza khona emihlambini. Yiya kwenye ye Iilwandle ezilungileyo kakhulu zaseKerala kwiinyanga phakathi kukaSeptemba noMatshi kwaye uya kuba namava angalibalekiyo. Okuninzi iilwandle ezidumileyo zaseKerala Kuya kufuneka undwendwele olona lwandle lubalaseleyo eKovalam, olufana nolwandle lweLightouse, iSamudra Beach kunye neHawa Beach / i-Eve's Beach, uninzi lweelwandle ezihanjelwe eKerala; I-Varkala Beach kunye neMari yaseMarari, ezinokuthula kwaye ayihambi rhoqo; iilwandle ezihlala zodwa zaseKannur, apho uya kufumana khona izindlu zaselunxwemeni; kunye neBekal Beach eMantla eKerala apho unokufumana iihotele ezihotele kufutshane.
Iilwandle zaseKerala zenziwe ngakumbi nangakumbi ngobukho beendawo zokukhanya ezintle nezinomtsalane kuzo, ezizezona zinomtsalane kubakhenkethi eKerala. Abanye be Iindawo zokukhanya ezidumileyo zaseKerala ekufuneka uhambe uyokubona iAlappuzha Lighthouse, eneminyaka eli-150 ubudala, iVarkala Lighthouse, neyakhiwa ngo-17.th yenkulungwane yiBritane, kunye neVizhinjam Lighthouse, eyiyo igumbi lokukhanya okuphezulu eKovalam.
Iindawo zemicimbi e Kerala
IKerala yahluke mpela kuba kweli lizwe linye awufumani kuphela iilwandle kunye namachibi kunye neendawo ezingasemva kodwa kunye nezikhululo ze-Inland Kerala ineentaba, iigorila kunye neentlambo zaseNtshona Ghats apho amahlathi ashinyeneyo axhasa khona ubuninzi bezilwanyana zasendle kunye Umhlaba omninzi ongagutyungelwanga ngamahlathi uphantsi kwamatyana eti kunye nekofu. Ezinye ze ezona zihikahika zeenduli eKerala Ungachitha iholide entle e-Wayanad, eneentaba ezingalunganga, imilambo, iingcambu zamanzi, kunye neziqholo zezityalo ezizenza zibukeke njenge-idyll; IMunnar, edume ngokulima iti kunye neentyatyambo eziluhlaza zeNelakurinji, eziqhakaza kube kanye kwiminyaka elishumi elinambini; kwaye IVagamon, ejikelezwe ziinduli ezintathu kwaye igcwele imithana kunye neendlela zendalo apho unokuthula ngoxolo ngendalo kwaye ufumane uxolo lwangaphakathi.
Izilwanyana zasendle eKerala
Kuba iKerala izele ngamahlathi emvula ahlala enamahlathi kunye neendawo ezifumileyo ezinamahlathi ashinyeneyo kwaye inemozulu efumileyo nenomhlaba ngokuqinisekileyo inezilwanyana zasendle kunye nezityalo ezahlukeneyo ezohlukeneyo. Izinto ezingaqhelekanga kunye nezihlala zixhaphakile kwaye zigcinwa zininzi Indawo yokuhlala zasendle eKerala, ezinye zazo kuya kufuneka uzame ukutyelela ngelixa ukwaseburhulumenteni. Ezinye zezona zidume kakhulu yiBegur Wildlife Sanctuary, apho uza kufumana isilwanyana esifana neBlub bulbul, iPeafowl, iibhere, iTrush ehlekisayo, iiPather, iihagu zasendle; IParambikulam Tiger Reserve, apho uza kufumana izingwe, izingwe, iMacaque enomsila wengonyama, iNdlovu yaseAsia, iPip Vipers, iKing Cobras, iGreat Pied Hornbill, njl .; neMangalavanam Bird Sanctuary, apho iindidi ezahlukeneyo zeentaka, ezinjenge-waterhen, i-marsh sandpiper, iintlobo ezahlukeneyo zamabhabhathane, kunye nemifuno engqonge imangrove.
I-Kerala ingqina iminyhadala emininzi kunye neminyhadala eyenza ukuba ibonakale inomdla kwaye inomdla indawo yokutyelela apho ufumana khona ithuba lokuzibonela ngokwayo inkcubeko kunye nomoya. Ngokuqinisekileyo kufuneka utyelele isixeko ngexesha le-Kochi-Muziris Biennale apho umboniso wehlabathi jikelele wobugcisa obuqhubekayo, oquka yonke into esuka kwifilimu, imithombo yeendaba entsha, kunye nobugcisa bokwenza, ukufakela, ukupeyinta, kunye nemizobo. Lo mnyhadala waminyaka le owona mboniso mkhulu kubugcisa eIndiya. Kuya kufuneka uphinde utyelele uMnyhadala wokuThengisa iGrand Kerala apho amashishini amancinci kunye namashishini amakhulu onke athabatha inxaxheba kumnyhadala wokuthenga owenzeka ngoDisemba ukuya kuJanuwari apho abathengi banikwa izaphulelo ezikhulu, iimbuyekezo, kunye nezipho zezipho ukukhuthaza Ukuthenga ukhenketho eKerala.
Sonke sinalo uncedo olufunayo ukuba ucwangcisa ukutyelela e-India kwaye ufune uncedo. Fumana uncedo ku Inkxaso yabathengi baseIndiya. Ngokwesiqhelo uya kuza kwi-Visa yabakhenkethi yaseIndiya kodwa zikho nezinye Iindidi zeVisa zaseIndiya (eVisa India) yokungena eIndiya I-Visa yeshishini laseNdiya kwaye I-Visa yezonyango yaseIndiya.